DAD BADAN OO GALBEEDKA IVORY COAST KU DHAAWACMAY - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
MSF oo ku baaqday in si degdeg ah loo joojiyo rabshadaha ka dhanka ah rayidka
Xaaladda ayaa weli ah mid aad u kacsan waxaana ay rabshadaha ka socdaan dhowr magaalo oo galbeedka Ivory Coast ku yaalla, in kasta oo uu dagaalkii weynaa ee kooxaha iska soo horjeeda ku dhex mareyey degaanka uu dhammaaday 31-kii Maarso.
Dad badan oo qaba dhaawacyo ka soo gaarey xabado ama baangado ayaa yimid isbitaallo ku yaalla magaalooyinka galbeedka dalka ee Danané, Man, iyo Bangolo. Kooxaha MSF ee qalliinka ee magaalada Bangolo ayaa taageeraya isbitaalka halkaas ku yaalla.
“Tirada dhaawacyada cusub ayaa ah mid aad looga naxo waxaana ay tilmaameysaa in ay rabshaduhu weli ka sii socdaan degaanka,” ayaa uu yiri Renzo Fricke, oo ah maareeyaha xaaladda degdegga ah ee MSF. “Xiisadda beelaha kala duwan u dhaxaysa ayaa aad u kacsan.”
1-dii Abriil, ayaa labaatan qof oo dhaawacyo qaba oo u baahan qalliin loo qaadey isbitaalka ku yaalla Bangolo, halkaa oo toban qof ay weli ku sugayeen in la qalo maalintaa.
Waxaa ay dhibaato ka jirtaa sidii ay dadku u soo gaari lahaayeen goobaha daryeelka sababta oo ah xiisadaha kacsan iyo rabshadda hadda ka taagan degaanka ayaa kumanaan qof ku khasbey in ay ka cararaan dhowr meelood oo ku yaalla galbeedka dalka. Dad badan ayaa ka cararay magaalada Blolequin waxaana ay u qaxeen Zouian-Hounien.
In ka badan 15,000 qof oo barakacayaal ah ay weli jooga kaniisadda Katooligga ee magaalada Duekoue oo ku taalla galbeedka dalka. ”Dadkan wey argagaxsanyihiin. Wax ay haystaanna lama arko, xitaa cunto,” ayaa uu yiri Fricke. “Naftoodu ayey u baqayaan haddii ay ka baxaan kaniisadda si ay cunto u raadsadaan.” Kooxaha caafimaadka ee ka shaqeynaya daarta kaniisadda gudaheeda ah ayaa daaweeyey 240 qof oo dhaawac ah tan iyo 29-kii Maarso; 14 kalena waxaa loo gudbiyey isbitaalka Bangolo si qalliin loogu sameeyo.
Marka laga reebo Guddiga Caalamiga ah ee Laanqeyrta Cas, MSF waa hay’adda keliya ee caalamiga ah ee galbeedka Ivory Coast ugu daryeesha dadka dhaawaca ah, islamarkaana wax ka qabato xaaladaha kale ee caafimaad ee degdegga ah, iyadoo isku dayeysa in daryeel caafimaad ay u geyso dadka ay rabashadaha iyo barakacu saameeyeen.
Kooxda MSF ee isbitaalka Bangolo waxey tan iyo 28-kii Maarso ay daweysey 121 qof oo dhaawacyo qaba. Intaas waxaa dheer in 45 qof ay daaweyn degdeg ah ku heleen isbitalka magaalada Man, iyo 29 oo iyaguna lagu daweeyey isbitaalka Danané, halkaas oo ay MSF ugu deeqdey qalab caafimaad iyo daawooyin si ay shaqaalaha caafimaadka uga caawiso in ay wax ka qabtaan dhaawacyada tirada badan. Kooxaha caafimaadka ee MSF ee warwareega iyo kuwa ka shaqeeya xarumaha caafimaadka ee galbeedka ayaa maalin kasta daweeya in ka badan 500 oo qof.
Magaalada Abidjan, ayaa dadku ay dhibaatooyin aad u weyn kala kulmaan in ay helaan daaweyn iyada uu halkaa dagaal ka socdo. Kooxda MSF ee xaafadda Abobo ayaa wada in ay daweeyaan dadka ay u suurtagasho in ay soo gaaraan isbitaalka halkaas ku yaalla. 37 qof oo dhaawac ah ayaa la daweeyey 1-dii Abriil, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen 30 qof oo ay soo gaareen dhaawacyo rasaas ay sababtay.
Toban iyo shan qof oo dhaawac ah ayaa maanta yimid isbitaalka ay MSF taageerto ee ku yaalla caasimadda, Yamoussoukro. Tas-hiilaadka caafimaadka ee guud ahaan ku yaalla Ivory Coast ayaa bixin karin daryeelkii caafimaad ee ay bixin jireen mana haystaan qalabka caafimaadka ee aasaasiga ah. Kooxaha caafimaadka ayaa sahay caafimaad ugu deeqa isbitaalada marka ay xaaladdu degantahay. Baahidu aad bey u badan tahay waxaana welwel laga qabaa dadka aan heli karin daaweynta.
MSF, waa hay’ad samafal caafimaad, waxaana ay si adag u ilaalisaa dhexdhexaadnimadeeda marka ay hawlaheeda ku dhex jirto. Hawlaha ay ka waddo Ivory Coast waxaa gebi ahaanba maaliyaddooda bixiya deeq-bixiyeyaal shakhsi ah, taas oo hubineysa in aan helno madax-bannaani buuxda.
Tags: colaad, Ivory Coast